ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း အရေပြားမည်းလာခြင်းကို ဘယ်လိုကုစားမလဲ? - Chit MayMay
Home Pregnancy Health ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း အရေပြားမည်းလာခြင်းကို ဘယ်လိုကုစားမလဲ?
Hyperpigmentation (ပုံမှန်ထက် အသားရောင်ရင့်လာခြင်း) လို့လည်း ရည်ညွှန်းတဲ့ အရေပြားမည်းလာခြင်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်။ ဒါက အသားညိုတဲ့သူတွေအကြားမှာ မြင်လွယ်နိုင်ချေများပါတယ်။ linea nigra (ဝမ်းဗိုက်အနှံ့ အမည်းလိုင်းတွေ)၊ melasma (မျက်နှာပေါ်မှာ တင်းတိပ်အမဲကွက်တွေ)နှင့် နို့သီးခေါင်းပတ်လည်အညိုကွက် မည်းလာခြင်း အပါအဝင် ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ပုံစံတွေကို သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ ရှိပြီးသား တင်းတိပ်တွေ၊ မွေးရာပါအမှတ်အသားတွေနဲ့ အမာရွတ်တွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ကျယ်ပြန့်လာပြီး ပိုမည်းလာနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အရာက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်းမှာ အရေပြားမည်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသလဲ?
ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် အရေပြားမည်းခြင်း (သို့) အရေပြားအရောင်ပြောင်းခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကို အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။ သို့သော် ဒါက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အီစရိုဂျင်၊ ပရိုဂျက်စတွန်နဲ့ melanocyte လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်းတွေ ပမာဏ များပြားလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အရေပြားမည်းခြင်းရဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေကို မြင့်တတ်စေနိုင်တဲ့ အခြားအချက်တွေက
hyperthyroidism ( သိုင်းရွိုက်လွန်ကဲခြင်း) ကဲ့သို့သော လက်ရှိအခြေအနေများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းအရေပြားအရောင်မှိန်ခြင်း/အရောင်ပြောင်းသွားခြင်းက ဘယ်အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်သလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီး ၉၀% ကျော်ဟာ အရေပြားပြောင်းလဲမှုအချို့ကို ကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။ အက်စထရိုဂျင်နဲ့ ပရိုဂျက်စတုန်းအဆင့် မြင့်တတ်လာမှုကြောင့် Melanin ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ပထမသုံးလပတ်လောက်မှာ စပါလိမ့်မယ်။
ပထမသုံးလပတ်မှစပြီး နို့သီးခေါင်းပတ်လည်အညိုကွက်နဲ့ လိင်အင်္ဂါတစ်ဝိုက်မှာ မည်းလာတာကို သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယသုံးလပတ်မှာ Linea nigra ကပိုသိသာထင်ရှားလာနိုင်ပါတယ်။
ဒီအရာအားလုံးက များသောအားဖြင့် မွေးပြီးနောက်လအနည်းငယ်ကြာမှာ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အချို့သောအရာတွေက အရောင်မှိန်သွားပေမယ့် ထာဝရတည်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း Pigmentation ကိုဘယ်လိုလျှော့ချနိုင်မလဲ?
အရေပြားပြောင်းလဲမှုက များသောအားဖြင့် မွေးဖွားပြီးနောက်မှာ ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်၊ သို့သော် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် အရေပြားမည်းတာကို လျှော့ချဖို့ အချို့သောနည်းလမ်းတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
နေရောင်ခြည်ပြင်းပြင်းကနေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ပါ- နေနဲ့ ထိတွေခြင်းက Pigmentation ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အထင်းရှားဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ပြင်ထွက်တဲ့အခါ ဦးထုပ်ဆောင်းပြီး အင်္ကျီလက်ရှည်ဝတ်တာတို့၊ SPF ပါဝင်တဲ့ လိုးရှင်းလိမ်းတာတို့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဖောလစ်အက်စစ်ဓါတ်အလုံအလောက်သောက်ပါ- ဖောလိတ်ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် အရေပြားပြောင်းလဲခြင်းတွေ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အစားအသောက်မှသော်လည်းကောင်း ၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းမှသော်လည်းကောင်း ဖောလစ်အလုံအလောက်ရအောင်လုပ်ပါ။
wax မလုပ်ပါနဲ့- waxing လုပ်ခြင်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်းမှာ အန္တရာယ်မရှိသော်လည်း melasma ကိုပိုဆိုးစေတဲ့ အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
“ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အရေပြားမည်းတာကို ကုစားဖို့ သဘာဝနည်းလမ်းများ”
သံပုရာရည်က အရေပြားအရောင်ချွတ်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိပြီး အမည်းစက်တွေ၊ အမည်းကွက်တွေကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ သံပုရာရည်ကို ရေနဲ့ ရောပြီး ထိခိုက်တဲ့အသားအရေပေါ်မှာ လိမ်းပေးပါ။
နနွင်းမှုန့်ကို သံပုရာဖျော်ရည်နဲ့ ရောစပ်ပါ။ အရေပြားပေါ်မှာလိမ်းပြီး အခြောက်ခံပါ။ ရေနဲ့ ဆေးကြောပါ။
အာလူးမှာ Azelaic acid ပါဝင်မှုက အရောင်ခြယ်မှုနဲ့ အစက်အပြောက်တွေ လျော့နည်းစေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ အာလူးစိမ်းတစ်လုံးကို ကြိတ်ပြီး အရည်ကိုညှစ်ပါ။ ထိခိုက်သော အသားအရေကို တိုက်ရိုက်လိမ်းပါ။ ခြောက်သွေ့အောင်ထားပြီး ရေကြက်သီးနွေးဖြင့်ဆေးပါ။
ရှားစောင်းလက်ပတ်မှာ ပါဝင်တဲ့ Aloin ကအသားအရေကို ကြည်လင်စေတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိပါတယ်။ ရှားစောင်းဂျယ်ကို ခြစ်ယူပြီး မည်းနေတဲ့ အရေပြားပေါ်မှာ အိပ်ရာမဝင်ခင် လိမ်းပေးပါ။
လိမ္မော်ခွံအမှုန့်၊ နို့နဲ့ ပျားရည်ကို ရောမွှေပါ။ အရောင်မည်းနေတဲ့ အရေပြားဧရိယာတွေမှာ လိမ်းပေးပြီး ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ၊ ပြီးမှရေနဲ့ ဆေးကြောပါ။
Previous articleကလေးတွေအတွက် ပဟေဠိကစားခြင်းရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူး (၅)ခု
Next articleမေမေတို့ရဲ့ ဆယ်ကျော်သက် သမီးလေးတွေကို Menstruation အကြောင်း ဘယ်လိုပြောပြမလဲ?